Ungayivakashela kanjani iPetra, ingcebo yaseJordani | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Iziqondiso, Jordan
Ngokungangabazeki ukwakheka kwe- Petra uyamazi. Yi- ikhadi leposi laseJordani kodwa kuvele nakumabhayisikobho amaningi aseHollywood. Cishe ufana nomnyango wesikhathi esedlule, emfihlakalweni, kokudala. Iqiniso ukuthi awukwazi ukuhlela uhambo oluya eJordani ngaphandle kokuthatha uhambo lokuya kule ndawo enhle enodumo lokuba khona Amagugu Omhlaba kusukela ngo-1985.
Ukuhamba lapho kuphela lapho umuntu angaqinisekisa khona ukuthi lesi sihloko sisebenza kuwo wonke amabanga othuli, wonke amadwala, ikholomu, ithempeli nobuciko obushiywe phambi kwamehlo ethu yize isikhathi sihamba, ngakho-ke nansi imininingwane esebenzayo ukuvakashela iPetra.
2 Uvakashela kanjani iPetra
3 IPetra Archaeological Park
Leli dolobha kwakuyinhlokodolobha yombuso waseNabatean eminyakeni eyizinkulungwane edlule, umbuso ukuthi wangena eMbusweni WaseRoma lokho bekubhekela ukukhulisa idolobha kuze kube yilapho liphenduka isikhungo esibalulekile sezohwebo. Noma ihlushwa ukuzamazama komhlaba okwesabekayo, ikwazile ukuhlala ngesikhathi futhi kuphela ngesikhathi sikaSaladin, ngasekupheleni kuka-1100, yayishiywe ezandleni zogwadule futhi ilibalekile.
Njengamagugu amaningi wezwe lasendulo kwabuya kwacaca ngekhulu le-XNUMX esandleni sabahloli bamazwe baseYurophu, kulokhu kusuka esandleni seSwitzerland esigama linguBurckhardt. Kwakungukubuyekezwa kwakhe okuhehe abanye abahloli bamazwe nabo abadale imifanekiso emihle kakhulu okumele ngabe yathandana nomvubukuli ongaphezulu koyedwa. Kodwa-ke, kwakungo-20s lapho kwenziwa khona ukumbiwa kokuqala kochwepheshe.
Namuhla iPetra ingenye yengcebo ebaluleke kakhulu yoMbuso waseJordani futhi ngaphezu kokuba yiNdawo yamaGugu Omhlaba futhi ingenye yezimangaliso ezintsha eziyisikhombisa zomhlaba.
Uvakashela kanjani iPetra
Kunezinketho eziningi, konke kuya ngokuthi isiqalo sakho sithini. Uma uku-amman, inhlokodolobha yaseJordani, kunamabhasi amaningi ezisuka ku-6: 30 ekuseni zifike emanxiweni ngezithuba ze-10: 30 ekuseni. Bavela enkampanini JET Ibhasi. Uhambo lokubuya luqala ngo-5 ntambama kanti amathikithi abiza i-JD 10 ngomlenze ngamunye. Imikhumbi yayo yakhiwe ngezimoto zesimanje, zingu-200 sezizonke, futhi yenza ezinye izinkambo eziningi ezweni lonke.
Ungasebenzisa futhi i- amakhumbi omphakathi aya kuWadi Musa isuka esiteshini uMujamaa Janobi. Uhambo luqala ngo-9 ekuseni kuye ku-4 ntambama, kanti emuva lubuya ngo-6 ekuseni bese inkonzo yokugcina iba ngo-1 ntambama. Kuyindlela eshibhile Yebo, kubiza uhhafu. ¿Ungakwazi thatha itekisi? Yebo, zombili zisuka e-Amman naseQueen Alia Airport kanti intengo ingu-90 JD uma uhamba ngemoto no-130 uma udlula i-van, ngemoto ephelele hhayi umuntu ngamunye.
Amatekisi omphakathi nawo axhumanisa i-Aqaba noWadi Musa ukuvakasha phakathi kweziteshi zamaphoyisa kuwo womabili amadolobha. Kunezinsizakalo ezinhlanu ngosuku futhi akusebenzi ngoLwesihlanu. Amaqabunga okuqala azungeze ihora lesi-6 ekuseni bese eshiya lapho egcwele. Uhambo luthatha ihora nesigamu, amahora amabilis futhi kufanele ubale ithikithi phakathi kuka-5 no-6 JD. Ekugcineni ungathatha netekisi, itekisi emhlophe esuka esiteshini samaphoyisa. Bacishe babe ngama-35 JD kepha kungathatha abantu abane. Kukhona namatekisi aluhlaza, lawa aze akusa nasemngceleni wakwa-Israyeli, cishe i-90 JD.
Kusuka emadolobheni afana neWadi Rum noma iMadaba ungafika nasePetra. Ngebhasi kusuka ngo-6 ekuseni. Thatha abagibeli eWadi Rum Visitor Center, ume endaweni yaseRum bese ufika ePetra ngabo-8: 30 ekuseni. Kubiza cishe i-5 noma i-5 JD. Kukhona namatekisi. Futhi kuyafana uma ufuna ukujoyina uMadaba.
Lolu hambo luhle kakhulu ngoba ibhasi lezivakashi lihamba ngeKing's Highway, enhle kakhulu, kangangoba kuze kube nokuma kwezithombe eWadi Mujib nakwezinye eKarak Castle ngehora ngaphambi kokufika eWadi Musa ngehora lesithathu 3 ntambama. Vele, le sevisi ingasetshenziswa kuphela uma uhlala e-Hotel Mariam, yize amanye amahhotela enikela ngezinsizakalo ezifanayo. Thola.
Futhi kukhona ukuvakasha ePetra kusuka empumalanga yakwa-Israyeli. Kunezikhala ezintathu zemingcele phakathi kuka-Israyeli neJordani: i-Allenby Bridge, i-Eilat neBeit Shean. Owokuqala uxhuma iJerusalema no-Amman kepha kufanele ube ne-visa yaseJordani elungiselelwe kusengaphambili. Ukuwela akunzima kepha kuthatha isikhathi eside ngakho-ke konke kuncike esikhathini onaso. Ungahle ufune ukubhuka uhambo olubiza kakhulu kepha olunamafutha amaningi.
IPetra Archaeological Park
Kuyisayithi enkulu kakhulu futhi ungayihlola ngokunethezeka, yize abantu bendawo bavame ukuzinikela njengabaqondisi. Kodwa-ke, kukhona labo abancoma kuze kube yizinsuku ezine noma ezinhlanu ukwenza ukuhlolwa okuphelele. Ngaphandle kokujabula kakhulu, ngingasho ukuthi ezimbili noma ezintathu zanele. Usuku olulodwa luzokushiya ukhathele futhi unomuzwa wokuthi awuhambanga lutho. Ngezinsuku ezimbili ezigcwele kwanele.
IWadi Musa idolobha lesimanje emaphethelweni epaki, namuhla enabantu abangaba yizinkulungwane ezingama-30. Igcwele izinhlaka zezokuvakasha, uma kwenzeka ufuna ukubhalisela ukuvakasha futhi amahhotela nezinye izindawo zokuhlala. Idolobha eliphephile elinabantu abanobungane futhi ungahlala lapha noma eduze kwepaki uma ufuna. Uma kunjalo, ungahamba ngezinyawo uye emanxiweni, uma kungenjalo ungahlala uhamba ngetekisi. Eduze kwepaki kunendawo yokupaka kanti futhi nesitobhi sebhasi eliya e-Amman noma e-Aqaba.
Amathikithi awashibhile kepha uhlukanisa isikhathi esengeziwe osinikezela ekuvakasheni. Ithikithi losuku olulodwa lalabo abachitha okungenani ubusuku obubodwa eJordani libiza ama-50 JD, izinsuku ezingama-55 nezinsuku ezintathu ezingama-60 JD Uma uvakashela ePetra ngokushesha nje lapho weqa umngcele ngu-90, 40 no-50 JD ngokulandelana. Uma futhi uhlala ubusuku futhi ubuyela emanxiweni ngosuku lwesibili, uzothola imbuyiselo ye-40 JD.
Uma ungahlali ubusuku ukungena ku-90 JD. Lapho uthenga ithikithi kufanele wethule ipasipoti. Ithengwa eSikhungweni Sezivakashi ngaphambi noma lapho uvakashela khona futhi ungakwazi khokha ukheshi noma ikhadi lesikweletu. Basikisela izinkambo ezintathu zokubuka indawo:
ICamino Principal, ihamba amakhilomitha ama-4 futhi ibiza ama-50 JD.
Isikhumbuzo seMain Road + Sacrifice, sigijima u-6 km
Umgwaqo omkhulu + Monastery, ugijima u-8 km.
Ungabheka lezi zivakashi kuwebhusayithi esemthethweni kanti ezinye zizoshicilelwa kulo Novemba. Kukhona nokuvakasha kwezimoto: zimbili, esisodwa sixhuma iSikhungo Sokuvakasha kanye noMgcinimafa (uhambo olubuyayo), 4 km), ku-20 JD; kanti omunye uxhuma Isikhungo neMnyuziyamu (uhambo lokuya nokubuya, olungu-8 km), ngo-40 JD. Yizimoto zabantu ababili.
Ukuvakashela ePetra ngokuyisisekelo akukwazi ukushiywa ngaphandle: iBab Al Siq, iDamu, iSiq, okubizwa ngokuthi uMgcinimafa noma i-Al Khazna (olungaphambili lwesonto oludumile lwedolobha), ezinye izingxenyana ezisezitaladini zomgwaqo owodwa, iTheatre, ithuna likaSilika, i-Urn Tomb, i-Palace Tomb, i-Corinthan Tomb, i-Roman Cemetery, i-Street of Columns, i-Great Temple, isonto eliyinhloko lase-Petra, i-Temple of the Winged Lions, i-Sacrifice Site, i-Tomb of iSosha LamaRoma, Isigodlo Sezindela ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Ungavakashela kanjani uPetra, umcebo waseJordani
Izinto ozozibona eMunich
Izinto eziyi-9 zamahhala ongazijabulela eRoma